ब्लग पूर्ण पी राई
किन उस्तै छ तीन दशकसम्म शैक्षिक बजेट?
देश श्रीलंकाकै अवस्थामा पुग्न लागेको हो भने शिक्षामा बजेट कम भयो भनेर चिच्याउनु ठीक होइन। तर‚ सरकारको दाबी जस्तै अर्थतन्त्र खास नकारात्मक छैन भने यस वर्ष पनि शिक्षामा बजेट नपुगेकै हो।
चुनावी घोषणापत्र: शैक्षिक क्षेत्रका लागि झूटका पुलिन्दा
स्थानीय चुनावका लागि राजनीतिक दलले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र हेर्दा दल र तिनका नेताहरूले शिक्षामा गरिने खर्च लगानी हो भन्ने बुझेको देखिँदैन।
स्कूलमा चुनावी गफ: जित्ने आधार दल, संगठन कि उम्मेदवारको व्यक्तित्व? शिक्षकहरू समाजका सबैभन्दा बौद्धिक वर्गमा पर्छन्। ज्ञान, विज्ञान, विचार र व्यवहारका अगुवा मानिन्छन्। तर‚ अब मानिन्छन् मात्रै। अहिले आम जनताभन्दा चेतनाको हिसाबले शिक्षक अगाडि भएको आभास पाइन छाडेको छ।
महामारीमा विद्यालय बन्द हुँदा शिक्षकलाई किन अपजस? शिक्षकप्रति राज्यसत्ता नीतिगत रूपमा सकारात्मक नहुँदासम्म जुनसुकै घटनाले गरेका शैक्षिक अवरोधको दोष शिक्षकले लिइरहनुपर्ने हुन्छ।
जनगणनामा भाषा खासमा राई जातिका मानिसले बोल्ने पहिचान भएका २६ वटा मौलिक भाषा छन्। हाम्रो जनगणनामा उल्लेख भए जस्तो ‘राईभाषा’ मात्रै लेख्दा ती सबै समेटिंदैनन्।
एमालेको त्यो विभाजन, यो विभाजन दुई दशकपछि नेकपा (एमाले) फेरि विभाजित भएको छ, तर त्यति वेलाको विभाजन र अहिलेको विभाजनमा सैद्धान्तिक रूपमा खासै फरक देखिंदैन।
कहाँ पुग्यो आदिवासी जनजाति आन्दोलन? राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनको सम्मिश्रण आदिवासी जनजाति आन्दोलनबाट केही अगुवाहरू नवधनाढ्य त बनेका छन्, तर समग्र आन्दोलनको शुरूआत र अहिले तुलना गर्दा ४० को दशकमा चर्चित किरण प्रधानको गीत ‘के सोचें मैले, के भयो अहिले’लाई चरितार्थ गरेको छ।
ठट्टा होइन स्वास्थ्य
टिप्पणी पूर्ण पी राई
शिक्षक विद्यार्थीको स्वास्थ्य प्रमुख कि विद्यार्थीको सिकाइ प्रमुख भन्ने नछुट्टिएसम्म स्वास्थ्यमा ठट्यौली भई नै रहने र शिक्षकले मार खाई नै रहनुपर्ने देखिएकाे छ।
बुख्याचाजस्ता ‘जनजाति नेता’!
बहुदलीय व्यवस्थामा शासन दलले गर्छ। दलको नेता शासक हुन्छ। तर, अहिलेका मूलधारका दलमा कोही पनि जनजाति सत्ताको नेतृत्व गर्ने हैसियतमा छैन। पार्टी नेतृत्वकर्तालाई ‘दाता’ मानेर बसेका छन्।